Niamey waa caasimada dalka Nayjar Hawey (Faransiis Faransiis: [njamɛ]) waa caasimadda iyo magaalooyinka ugu ballaaran ee gobolka Waqooyiga Afrika ee Niger. Caydiidu waxay ku taalaa webiga Niger, oo badi ku yaal bangiga. Waa xarun maamul, dhaqan iyo dhaqaale. Dadweynaha Niamey waxaa loo tiriyay 978,029 sida tirakoobka 2012; Xarunta Hoose ee Niamey, oo daboolaysa 670 km2, waxay ahayd 1,026,848 qof. Ilaa 2017, saadaasha dadweynaha waxay muujineysaa in caasimadda ay sii kordheyso heerarka hoos udhaca marka loo eego wadarta guud ahaan dalka, oo leh heerarka bacriminta ugu sarreeya dunida. 
Magaaladu waxay ku taallaa gobolka xajmiga dhirta, halka warshadaha wax soosaarku ay ka mid yihiin lebbiska, alaabta dhoobada, sibidhka iyo walxaha.
Eeg sidoo kale: Xilliga Timey
Hooyo waxaa la aasaasay qarnigii siddeedaad, laakiin waxay ahayd mid muhiimad u leh dalka intiisa badan ilaa Faransiiska ay soo saartey boosteejo gumeysi ah 1890-kii. Tani waxay si degdeg ah u korodhay xarun muhiim ah. Sanadkii 1926 waxa uu noqday caasimadda Niger, dadkuna si tartiib tartiib ah ayey u kordheen, laga bilaabo qiyaastii 3,000 sanadkii 1930 ilaa 30,000 sanadkii 1960.  Muddadii u dhaxaysay 1970-kii ilaa 1988-kii ayaa mid ka mid ah dhaqaalihii reer Niger ee soo maray, isaga oo dakhliga ka soo galay maraakiibta yurubta ee Arlit. Xilligan, dadka reer Togdheer waxay ka kicitimeen 108,000 ilaa 398,365 qof. Magaaladu waxay ka ballaarantey 1,367 hektar (3,380 hektar) sanadkii 1970 ilaa 4,400 hektar (11,000 hektar) 1977-dii, iyada oo la adeegsanayo tuulooyinka daba-galka ah sida Lazaret. 
Qiyaastii qaar ka mid ah qiyaasaha dadku waxay gaareen 800,000 sannadkii 2000. Sannadkii 2011, saxaafadda ayaa lagu qiyaasey tirada guud ee magaalooyinka in ka badan 1.5 milyan. Sababta ugu weyn ee kororka ayaa u socotay socdaalka shaqada iyo muddada abaaraha, iyo sidoo kale kobaca dadweynaha oo aad u sareeya.  Caddadkan ugu dambeeyay macnaheedu waa inta badan muwaadiniinta magaalada waa dhallinyaro.  Hooyo laga arkay Satellite Spot View Astronaut View of Niamey Meelaha ay ka kooban yihiin 250 km2 (97 mq m), aagga caasimadda ayaa ku fadhiya laba taagal oo gaaraya 218 m (715 ft) oo kor u dhaafeysa, oo ay udhashey Webiga Niger. Marka la eego waaley, webiga, oo u orodka tooska ah ee SSE ee Gao, ayaa ka dhigaya taxane balaadhan oo ballaadhan. Magaaladan waxaa lagu aasaasay bariga ("bangiga bidixda") ee wabiga ah sida ay uga fogaanayaan galbeedka ilaa bari si ay ugu dhowaadaan si toos ah koonfurta. Jasiirado marshi ah oo isdaba jooga ah ayaa ka bilaabanaya magaalada Niamey wuxuuna kordhay koonfurta webiga.
Cimiladu waa dabeysha kuleyl (kuleylka cimilada ee Köppen BS), iyadoo ay jirto roobab u dhexeeya 500 mm (20kg) iyo 750 mm (30) sanadka, inta badan waxay ka billowdaan dabeylo dhowr ah bishii May, ka dibna u gudubaya roobab xilligaas, badanaa waxay ka socdaan wakhti ilaa Juun ilaa horraantii Sebtembar, marka roobabku si deg deg ah u daadiyaan. Badankooda roobabku waxay ka yimaadaan lat
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Niamey&oldid=209953"
Last edited on 28 Febraayo 2021, at 17:23
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Febraayo 2021, marka ee eheed 17:23.